काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा व्यावसायिक साझेदार प्रभाकर शमशेर राणाको निधन भएको छ । होटल सोल्टीका संस्थापक अध्यक्ष राणाको ८४ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा निधन भएको हो । र...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ को बजेट जन चाहाना विपरित भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रे...
चुरोट र मदिरा सहित पेट्रोलियम, खाद्यपदार्थ तथा सिमेन्ट र रडको पनि मूल्यवृद्धि
बजेटले पेट्रोल, डिजेलबाट पूर्वाधार करबापत थप एक रुपैयाँ उठाउने नीति लिएको छ । हाल यो शीर्षक (सडक मर्मतसम्भार कर) अन्तर्गत पेट्रोलबाट चार रुपैयाँ र डिजेलबाट दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर असुल हुँदै आएको छ । ...
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ
संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यातायात व्यवस्थापनमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण ...
अविवाहितलाई ४ लाख र विवाहितलाई साढे चार लाखसम्मको आम्दानीमा छुट
बजेटले आयकरको दर वृद्धि गरेको छैन । बरु आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरिएको छ । अब अविवाहितले चार लाखसम्म र विवाहिले चार लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्दैन । यसअघि अविवाहितले तीन ला...
सरकारले आव २०७६/७७ का लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको आयव्यय विवरण ...
संघीय संसदमा बजेट भाषण शुरु (लाइभ)
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६र/०७७ का संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदानका ...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १५ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबा...
‘लोकप्रिय’ बजेट आउँदै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भ...
मुलुक १० खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा
मुलुक करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋणमा परेको छ । सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार डलर महँगीनु र वैदेशिक ऋण बढ्नुलगायत कारणले नेपालको ऋणभार चुलिएको हो । ‘२०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँ...
ब्ल्याङ्क चेक लिई रकम बढाई चेक बाउन्स गर्ने महिला पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-१५ स्वयम्भुस्थित फेन्सी पसल संचालन गरी बस्ने सिन्धुपाल्चोक पाङग्रेटार घर भएकी ३६ वर्षीया अपसरा श्रेष्ठ (कार्की) लाई ब्ल्याङ्क लिई रकम बढाई चेक बाउन्स गरेको अभियोगमा श...
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । बजारमा इन्धनको माग बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा धेरै आयात भएको हो । ...
विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ । बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्...
काठमाडौं । करोड भन्दा बढी नक्कली भारतीय रुपैंया सहित छ जना पक्राउ परेका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार चेकिङका क्रममा दुई करोड नक्कली भारु नोट सहित उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । दुई ...
नवलपरासी धौवादी फलाम खानीको मेटालोजिकल परीक्षण सम्पन्न भएको छ । खानी उत्खननका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो परीक्षण चीनमा गरिएको र नतिजा सकारात्मक आएको छ । आगामी दिनमा फलाम उत्पादनको अन्तिम तयार...
काठमाडौं । श्रोत नखुलेको नगद ३१ लाख रुपैंया सहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा भक्तपुर जगातीबस्ने ५० वर्षीय राजभाई सञ्जु र झापा चारपाने घर भई हाल काठमाडौं सिनामंगल बस्ने ३३ वर्षीय अभिष...
काठमाडौं । सुरक्षा निकायको सेटिङमै राजस्व चुहावट भइरहेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजपाका सांसद प्रभु साहले उक्त आरोप लगाएका हुन् । राजस्व चुहावट अन...
काठमाडौं । प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विद्येयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । त्यस्तो विद्येयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरुले आश्...